Le khamera entsha yeCasio iphefumlelwe sisixhobo se Iron Iron | Iindaba zeGajethi
Uphawu lwentsomi lwewotshi uCasio izama ukuziqhelanisa neemfuno zentengiso ezintsha. Kwiminyaka embalwa, inkampani ibonelele ngeendlela ezahlukeneyo zewatchwatches ezijolise eluntwini ezifuna izixhobo ezinganyangekiyo kubuninzi, nangona ukusebenza kwazo kuchaphazele. Kodwa ayisiyiyo kuphela inkohliso yenkampani kule ndawo, kuba inkampani yaseJapan izakubonisa nge-27 ka-Okthobha ikhamera entsha yesenzo ebizwa Casio GZE-1, Ikhamera esikhumbuza uninzi lweenxalenye zesikrweqe se-Iron Man kwaye eyilelwe ukubonelela ngobuninzi bokuchasana nokubethwa kunye nemozulu.
Ukongeza, abathengi benkampani abathembekileyo baya kuba nakho ukubona ukufana okungaphaya kokufanelekileyo kuluhlu lweewotshi zemidlalo ezivela kwinkampani yaseJapan iG-SHOCK. I-GZE-1 entsha ilandela umgca wemveliso ye-G-SHOCK obonelela ngoyilo olufanayo kunye nokuqina. Ikhutshwe nge Uthuli lwe-IP6X kunye nokukhuselwa kwamanzi kwe-IPX8, kuyivumela ukuba imelane nethontsi ukuya kuthi ga kwi-4 yeemitha ukuphakama, ubunzulu bokuntywila ukuya kuthi ga kwi-50 yeemitha, kunye namaqondo obushushu ukuya kuthi ga kwiidigri ezili-10 ngaphantsi kweqhina.
Ikhamera ye-GZE-1 ine-6,9 megapixel sensor ene-lens ebanzi evumela ukuba senjenjalo Rekhoda iividiyo ezijolise kwi-170,4-degree kwi-HD epheleleyo. Ukuba, kwelinye icala, sifuna ukuthatha imifanekiso, i-angle yokujonga iyandiswa ukuya kwiidigri eziyi-190,8. Ine-stabilizer, asazi ukuba iya kuba yeyombane okanye yedijithali, kunye nokukhetha okusivumela ukuba sibhale phantsi kwisantya esincinci ukuba sonwabele isenzo ngokweenkcukacha.
Njengomanduleli wayo, i-GZE-1 inonxibelelwano lwe-Wi-Fi ukunxibelelana nezixhobo ezilawulwa nge-Android okanye i-iOS ukujonga zombini iifoto kunye neevidiyo esizithathileyo. Ukuba sinenye yeemodeli zeWSD F20 okanye zeWSD F10, siya kuba nakho fikelela kumxholo orekhodiweyo ngaphandle kokusebenzisa i-smartphone yethu. Nge-27 ka-Okthobha, uCasio uzakuveza ngokusesikweni le khamera intsha kwaye uya kubonelela ngazo zonke iinkcukacha zale modeli yekhamera yezemidlalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Le khamera entsha yeCasio iphefumlelwe sisixhobo se Iron Iron
Okufanayo kukhumbuza ngaphezulu kwinqanaba eliphakathi eliphakathi kweCasio g-zothusa zobomi ngaphezu kwalo naluphi na uhlobo lweencwadi ezihlekisayo, okanye ubuncinci zinento yokwenza noluhlu lweewotshi, yiza ndiza kuthi ...
Intlawulelo entsha ithatha iiAndrioids kwaye iyazithintela de sihlawule intlawulelo